Te Hanome ny Tsara Indrindra
Tsy mora ny mahita hoe inona ny fanomezana tena mety amin’ny olona iray. Tsy mitovy mantsy ny olona, fa samy manana an’izay heveriny hoe tsara na sarobidy.
Mety ho ny fitaovana elektronika nivoaka farany no tena irin’ny tanora ho azo. Lova indray no mety ho tian’ny olon-dehibe kokoa. Any amin’ny tany sasany kosa, dia aleon’ny olona omena vola. Samy tia an’izany, na ny kely na ny lehibe, satria azony ampiasaina amin’izay itiavany azy ilay izy.
Maro no te hanolotra fanomezana mety tsara amin’ny olona iray, na dia tsy mora aza izany. Tsy voatery hahita iray tena mety ianao, nefa misy lafin-javatra efatra mety hanampy anao hahita izay tadiavinao. Ho afa-po kokoa ilay olona omenao fanomezana, raha mieritreritra an’ireto ianao:
Ny fanirian’ilay omena. Nahazo bisikileta ny lehilahy iray any Belfast, any Irlandy Avaratra, tamin’izy 10 na 11 taona. Izany, hono, no fanomezana tsara indrindra azony. Nahoana? Satria efa nonofinofisiny ilay izy. Arakaraka ny zavatra irin’ny olona tokoa no itiavany na tsia an’izay fanomezana azony. Eritrereto àry ilay olona kasainao homena fanomezana. Fantaro hoe inona no mety ho sarobidy aminy, satria arakaraka izay matetika ny zavatra tiany. Sarobidy amin’ny dadabe sy bebe, ohatra, ny fotoana iarahany amin’ny fianakaviany. Mety ho tiany ny hihaona matetika kokoa amin’ny zanaka aman-jafiny. Azo inoana àry fa ho faly be izy ireo raha entin’ny fianakaviany manao vakansy. Izany no mety ho fanomezana tsara indrindra aminy!
Ilaina ny mihaino tsara mba hamantarana an’izay tian’ny olona iray. Hoy ny Jakoba 1:19: “Aoka isika ho mailaka hihaino, tsy ho maika hiteny.” Henoy tsara ny namanao na ny havanao rehefa miresaka ianareo, dia ho fantatrao izay tiany na tsy tiany. Ho mora kokoa aminao amin’izay ny hahita an’izay fanomezana mety aminy.
Ny zavatra ilainy. Na fanomezana faran’izay tsotra aza mety ho tian’ny olona iray, raha tena ilainy ilay izy. Ahoana anefa no hahafantaranao an’izay ilainy?
Anontanio izy. Izay no tsotra indrindra. Mampihena ny fifalian’ilay mpanome anefa izany matetika, satria tiany kokoa raha tsy ampoizin’ilay olona ny fanomezana ataony. Misy koa tsy te hilaza an’izay zavatra ilainy, na dia tsy misalasala aza izy miresaka an’izay tiany na tsy tiany.
Mahaiza àry mandinika, ary fantaro ny mombamomba an’ilay olona. Tanora ve izy sa antitra? Mpitovo sa manambady? Nisara-bady sa maty vady? Miasa sa efa misotro ronono? Eritrereto avy eo hoe inona no fanomezana mety hilain’ilay olona.
Miresaha amin’ny olona miatrika toe-javatra mitovitovy amin’ny an’ilay kasainao homena fanomezana, mba hahatakaranao hoe inona no ilainy. Mety hisy zavatra ilainy manokana, nefa tsy fantatry ny ankamaroan’ny olona ka tsy eritreretiny homena. Ho afaka hanome fanomezana tena ilain’ny hafa ianao amin’izay.
Ny fotoana anomezana azy. Hoy ny Ohabolana 15:23: “Tsara erỳ ny teny lazaina amin’ny fotoana mety!” Mety hisy vokany be amin’ny olona àry ny tenintsika, arakaraka ny fotoana ilazantsika azy. Ho faly izy raha mety tsara ny fotoana iresahantsika aminy. Misy vokany hoatr’izany koa ny zavatra ataontsika. Ho faly ilay olona, raha mety tsara ny fotoana na ny toe-javatra anolorantsika azy fanomezana.
Fanaon’ny olona, ohatra, ny manomana fanomezana, rehefa misy namany hanambady, na tanora efa hahavita fianarana, na mpivady hahazo zazakely. Raketiny an-tsoratra matetika ny fotoana hitrangan’ireo zavatra miavaka ireo. Afaka manomana an’izay fanomezana mety tsara amin’ilay olona àry izy ireo. *
Tsy rehefa fotoana manokana ihany anefa ianao no afaka manao fanomezana. Mahafaly ny manome, na rahoviana na rahoviana. Ilaina anefa ny mitandrina. Mety hisy vehivavy, ohatra, hieritreritra hoe te hahalala azy bebe kokoa ny lehilahy iray, matoa manome azy fanomezana nefa toa tsy misy antony manokana akory. Mety hiteraka olana izany, raha tsy izay akory no tanjon’ilay lehilahy. Ilaina dinihina koa àry ny antony mahatonga ny olona iray hanao fanomezana.
Ny antony anomezana. Asehon’ilay ohatra teo fa tsara jerena ihany sao dia diso fandray ny antony anolorana azy zavatra ny olona iray. Na ilay mpanome koa aza tokony handinika ny antony anaovany an’ilay izy. Tiantsika raha tsara ny antony anolorantsika fanomezana. Maro anefa no mahatsiaro ho voatery hanao fanomezana, rehefa vanim-potoana sasany. Misy koa manome satria te hahazo fikarakarana manokana na manantena hahazo tambiny.
Inona àry ny antony tokony hanoloranao fanomezana? Hoy ny 1 Korintianina 16:14: “Ataovy amim-pitiavana izay rehetra ataonareo.” Tena tia sy miahy an’ilay olona ve ianao? Ho faly izy raha izany no antony anoloranao azy fanomezana. Ho sambatra ianao satria tena malala-tanana. Ho faly koa ilay Raintsika any an-danitra, raha tena vokatry ny fo ny fanomezana ataonao. Noderain’ny apostoly Paoly ny Kristianina tany Korinto, satria nalala-tanana izy ireo sady faly nanampy an’ireo namany sahirana tany Jodia. Hoy izy: “Ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra.”—2 Korintianina 9:7.
Ho faly kokoa ny olona raha mandinika an’ireo lafin-javatra ireo isika, alohan’ny hanolorana azy fanomezana. Ireo lafiny ireo no anisan’ny antony nanaovan’Andriamanitra an’ilay fanomezana lehibe indrindra ho an’ny olombelona. Inona izany fanomezana izany? Ho hitanao ao amin’ny lahatsoratra manaraka ny valiny.
^ feh. 13 Maro koa no manolotra fanomezana rehefa andro fety na aniversera. Tsy mifanaraka amin’ny Baiboly anefa matetika ny fanao amin’izy ireny. Jereo ato amin’ity gazety ity ilay hoe: “Manontany ny Mpamaky: Natao ho An’ny Kristianina ve ny Krismasy?”